News – Page2– Myanmar Myinkwin Zone
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် ရလာမယ့် ရလဒ်ကောင်းများ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် ရလာမယ့် ရလဒ်ကောင်းများ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအတွက် ရလဒ်ကောင်းတွေ အများအပြား ပေါ်ပေါက်လာမှာ သေချာပါတယ်။ ထိုရလဒ်ကောင်းတွေနဲ့အတူပဲ ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးခရီးလမ်းမှာ စိန်ခေါ်မှုတွေကိုလည်း ရင်ဆိုင်လာရမှာသေချာပါတယ်။ အကယ်၍ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်လာပြီး NLD အဖွဲ့ချူပ် အစိုးရဖြစ်လာခဲ့ရင် […]
မိဘတွေဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ပြီး ထားခဲ့တဲ့ကလေးကို ခုအရွယ်ထိဖြစ်အောင် မွေးစားခဲ့တဲ့ ဦးပဇင်း
မိဘတွေဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ပြီး ထားခဲ့တဲ့ကလေးကို ခုအရွယ်ထိဖြစ်အောင် မွေးစားခဲ့တဲ့ ဦးပဇင်း မဂ်လာပါပရိတ်သတ်ကြီးရေ။သားကိုအရှက်ကြောင့်ပစ်ခဲ့တာလားအသက်ကြောင့်ပစ်ခဲ့တာလားလွမ်းရေးကြောင့်ပစ်ခဲ့တာလားပြောပါမေမေ မိဘမဲ့ခလေးလို့အခေါ် ခံနေရတာသာဘ ဝအကြီးမားဆုံးသောရူံးနိမ့်မူ့ကြပါမေမေရယ်။ အဖော်မရှိတဲ့ဘဝကပင်လယ်ပြင်လယ်လမ်းပျောက်နေတဲ့လှေငယ်လေးလိုပါ။ခိုကိုးရာမဲ့ဘဝထဲ အားကိုးမဲ့မေဘယ်မှာလည်းမမေရေ။ အမိမဲ့သားရေနဲငါးသွေးမပျက်ပါအမေပေးရက်တာအမေ့ဆ န္ဒ သံသယဆိုတာမထားပါရစေနဲ့တော့။သားဟာအမေ့သားပါအ ဖေထားခဲ့တာအမေပါ အမေထားရက်တာသားပါအမေသားကိုအရှက်ကြောင့်ပစ်ခဲ့တာလားအသက်ကြောင့်ပစ်ခဲ့တာလား လွမ်းရေးကြောင့်ပစ်ခဲ့တာလားဝမ်းရေးကြောင့်ပစ်ခဲ့တာလားနားလည်ပါရစေအမေ။ နို့ဘူးထဲကနို့ချိုရည်အမေ့နို့မဟုတ်မှန်းသားသိတယ်နူးညံ့စွာထွေးထားတဲ့လက်အမေ့လက်မဟုတ်မှန်း သားသိတယ်အသက်တစ်ချောင်းနဲ့လူသားတန်ဘိုးထားပုံခြင်းများမှားနေသလားအမေ။ မေ့ရင်နဲ့လွယ်ထားရတဲ့ကာ […]
ဆိုင်ကယ်စီးမောင်းနှင်သူများအတွက် ထပ်မံပေါ်ထွက်လာတဲ့ မော်တော်ယာဉ် ဉပဒေအသစ်
ဆိုင်ကယ်စီးမောင်းနှင်သူများအတွက် ထပ်မံပေါ်ထွက်လာတဲ့ မော်တော်ယာဉ် ဉပဒေအသစ် ဥပဒေသစ်တွေထုတ်လိုက်ပြီနော် အားလုံးဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ…. (2022-ဥပဒေသစ်) ယာဉ်နံပါတ်မထင်ရှား = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-က)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ = ဒဏ်ငွေသုံးသိန်း. ထောင် သုံးလ။ အခြားနံပါတ်တပ် = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-ခ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ = […]
လမ်းဘေးခွေး(၃၀၀) ကျော်ကို (၁၄)နှစ်လုံးလုံး ရက်မပျက်ဘဲ တစ်ရက် ငါးသောင်းကျပ်ဖိုး ကုန်ကျခံ ကျွေးမွေးနေခဲ့သူ
Zawgyi လမ်းဘေးခွေး(၃၀၀) ကျော်ကို (၁၄)နှစ်လုံးလုံး ရက်မပျက်ဘဲ တစ်ရက် ငါးသောင်းကျပ်ဖိုး ကုန်ကျခံ ကျွေးမွေးနေခဲ့သူ မုံရွာမြို့ ရဲ့နေရာအနှံ့က လမ်းဘေးခွေး အကောင် (၃၀၀) ကျော်ကို ညနေတိုင်း တစ်ရက်ကို ငွေ (၅) သောင်းကျပ်ဖိုးခန့် […]
ခရမ်းမြို့အဝင်အထွက် စစ်ဆေးရေးဂိတ် တာဝန်ကျ စစ်သားများ ထွက်ပြေးသွား၍ လိုက်လံ ရှာဖွေနေ
Zawgyi ခရမ်းမြို့အဝင်အထွက် စစ်ဆေးရေးဂိတ် တာဝန်ကျ စစ်သားများ ထွက်ပြေးသွား၍ လိုက်လံ ရှာဖွေနေ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ခရမ်းမြို့ အဝင်အထွက်ဂိတ်တွင် တာဝန်ကျသည့် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ၏ တပ်သားများ ထွက်ပြေးသဖြင့် မြို့တွင်းနှင့်ကျေးရွာများအထိ ယနေ့ ဇန်နဝါရီလ(၂၃)ရက်နေ့တွင် လိုက်လံရှာဖွေနေကြောင်း […]
Zawgyi မင်းအောင်လှိုင်အလိမ်တွေထပ်ပေါ်ကုန်ပီ! ၅၉(စ) ပြင်ဖို့ NLD ဘက်က ညှိနိူင်းခဲ့တာ မရှိ” ပုဒ်မ ၅၉(စ)ပြင်ဖို့ သွားတယ်ဆိုတာ လုံးဝမမှန်တဲ့၊ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ စကားပါဗျာ။ တပ်ချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့နဲ့ သမ္မတဖြစ်ချင်တာတို့အတွက်ကိုပဲ သူ့ဘက်က အ ကြိမ်ကြိမ်ညှိနှိုင်းတာပဲ ရှိပါတယ်။ […]
၀င်ကြည့်ရင်းအပျော်တွေကူးစက်သွားစေမဲ့ေ.သနတ်အသစ်ရလို့ပျော်နေတဲ့ PDF ရဲ​ဘော်လေးများ (ရုပ် သံ)
Zawgyi ၀င်ကြည့်ရင်းအပျော်တွေကူးစက်သွားစေမဲ့ေ.သနတ်အသစ်ရလို့ပျော်နေတဲ့ PDF ရဲ​ဘော်လေးများ (ရုပ် သံ) အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည် ၀င်ကြည့်ရင်းအပျော်တွေကူးစက်သွားစေမဲ့ေ.သနတ်အသစ်ရလို့ပျော်နေတဲ့ PDF ရဲ​ဘော်လေးများ (ရုပ် သံ) ၀င်ကြည့်ရင်းအပျော်တွေကူးစက်သွားစေမဲ့ေ.သနတ်အသစ်ရလို့ပျော်နေတဲ့ PDF ရဲ​ဘော်လေးများ (ရုပ် သံ) […]
၀င်ကြည့်ရင်းကြက်သိန်းမွှေးညှင်းများထသွားစေမဲ့ နိုင်ငံ့အကျိုးဆောင် PDF လေးတွေရဲ့ `ဗမာ့ဒေါင်း တို့စစ်သည်´ သီချင်း (ရုပ် သံ)
Zawgyi ၀င်ကြည့်ရင်းကြက်သိန်းမွှေးညှင်းများထသွားစေမဲ့ နိုင်ငံ့အကျိုးဆောင် PDF လေးတွေရဲ့ `ဗမာ့ဒေါင်း တို့စစ်သည်´ သီချင်း (ရုပ် သံ) အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည် ၀င်ကြည့်ရင်းကြက်သိန်းမွှေးညှင်းများထသွားစေမဲ့ နိုင်ငံ့အကျိုးဆောင် PDF လေးတွေရဲ့ `ဗမာ့ဒေါင်း တို့စစ်သည်´ သီချင်း (ရုပ် သံ) […]
PDF မလေးကို သွားဖွန်ကြောင်မိတဲ့ PDFရဲဘော်လေးရဲ့ အဖြစ်PDF မလေးကို သွားဖွန်ကြောင်မိတဲ့ PDFရဲဘော်လေးရဲ့ အဖြစ်
PDF မလေးကို သွားဖွန်ကြောင်မိတဲ့ PDFရဲဘော်လေးရဲ့ အဖြစ်PDF မလေးကို သွားဖွန်ကြောင်မိတဲ့ PDFရဲဘော်လေးရဲ့ အဖြစ် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အခုပြောပြမှာကတော့ တောထဲက Pdfကောင်လေး တစ်ယောက်က pdf မလေးတစ်ယောက်ကို ဖွန်သွားကြောင်မိလို့ ထိပ်တုံးခတ် ပစ်ဒဏ်ပေးချင်းခံခဲ့ရတာပါ။ဆယ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူများကဲ့သို ဘဝအတွက်စာမေးပွဲ […]
စစ်ကောင်စီနောက်လိုက် ဒေါ်သက်သက်ခိုင်နဲ့ဦးသန်းရွှေသမက် ဒေါက်တာနေစိုးမောင် ပွဲကြမ်းပြီ
စစ်ကောင်စီနောက်လိုက် ဒေါ်သက်သက်ခိုင်နဲ့ဦးသန်းရွှေသမက် ဒေါက်တာနေစိုးမောင် ပွဲကြမ်းပြီ အာဏာရှင်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ သမက် တပ်မတော် အရာရှိဟောင်း ဒေါက်တာ နေစိုးမောင်က အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ နောက်လိုက် ဒေါ်သက်သက်ခိုင်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန် […]
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တမ်းကုန်နေသူများ အတွက် သတင်းကောင်း
ကုလသမဂ္ဂမှာ မြန်မာ့သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း မိန့် ခွန်းပြောပြီ
ဗိဿနိုးမငျးဆကျမြားနှငျ့ ဗိဿနိုးမွို့ဟု ချေါတှငျရသောအကွောငျး
ဘဝကို (သုည)က စပါ (၁)မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပီးဖတ်ပါ
မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ တောက်တဲ့ လိုမျိုး မိတ်ဆွေစစ်ကို သေတဲ့အထိ တန်ဖိုးထားပါ